I-Old-Town Roof-Garden Suite - I-Airbnb
I-Old-Town Roof-Garden Suite
146 okushiwo abanye
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Nelly
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Okt 29.
Řop floor, esanda kwakhiwa, i-retro style suite ethala elikhulu, etholakala engxenyeni enhle kakhulu nekhangayo yedolobha.
Ikamelo elisha sha, elinokuhlobisa kwe-retro, nethala elikhulu eliphezu kophahla esifundazweni esihle kakhulu nesivakashi sedolobha.
Okokuzithokozisa okuyingqayizivele edolobheni elidala lase-Kavala.
Ikamelo lethu elisanda kwakhiwa litholakala engxenyeni enhle kakhulu nekhangayo yedolobha yezivakashi. Itholakala esitezi esiphezulu sesakhiwo esinezitolo ezintathu, ihlotshiswe ngesitayela se-retro. Isikhungo sedolobha, isigodlo sokuhlukaniswa wedwana, isikhungo sokuthenga, isitolo esikhulu, amathilomu, ama-bar, izindawo zokudlela kanye nolwandle konke kuqhele ngamakhilomitha angu-5 kuphela.
Ikamelo lifanele abantu abashadile, abahambi abangashadile nemindeni enengane eyodwa eneminyaka engu-10 ubudala, abangakwazi ukulala kusofa. Ilungele amaholide unyaka wonke kanye nohambo lwebhizinisi.
Ikhishi langasese negumbi lokugezela eliseduze linakho konke okudingekayo futhi lisebenza kahle.
Ematheni amakhulu ungajabulela isidlo sakho sasekuseni, ikhofi, isidlo sasemini noma iwayini phakathi nokuhlala kwakho. Uzojabula ngesimo sokuphumula sendawo kanye nokubukeka okuhlaba umxhwele kolwandle nedolobha. Uzoba nethuba lokubona ukukhetha kwethu okukhulayo kwama-succulents nama-cacti.
Sikuqinisekisa ngokwamukela okufudumele nokuhlala okumnandi endaweni engavamile.
Zizwe ukhululekile ukuthumela noma yimiphi imibuzo futhi sizophendula ngokushesha ngangokunokwenzeka.//
Esifundeni esihle kakhulu nesinezivakashi, esakhiweni esinezitezi ezintathu, kukhona ikamelo elisha sha, elinokuhlobisa okuphindaphindiwe, eduze kakhulu (ukuhamba okungu-5') ukusuka enqabeni, enkabeni yedolobha, inxanxathela yezitolo, izitolo ezinkulu, amathilomu, ama-bar, ama-tavernas nolwandle.
Ikamelo lifanele abantu abashadile, abahamba bodwa nemindeni enengane eyodwa eneminyaka engu-10 ubudala, engabungazwa kusofa. Ilungele amaholide ngazo zonke izikhathi zonyaka kanye nohambo lwebhizinisi.
Ikhishi langasese negumbi lokugezela linakho konke okudingekayo futhi lisebenza nakuba ngamamitha-skwele ambalwa.
Ku-veranda enkulu ungajabulela isidlo sasekuseni, ikhofi, isidlo noma iwayini, phakathi nokuhlala kwakho. Uzojabula ngomoya, ukubuka okuyingqayizivele, indawo, abantu, indawo ezungezile.
Sikuqinisekisa ngokuhlala okukhangayo endaweni ye-idyllic ene-aura emangalisayo.
Uma unemibuzo, sicela uzizwe ukhululekile ukusibhalela futhi sizobuyela kuwe ngokushesha ngangokunokwenzeka.
umbhede oyidabulu engu- 1, 1 usofa
ubusuku obungu-7 e- Kavala
Nov 3, 2022 - Nov 10, 2022
4.99 out of 5 stars from 146 reviews
4.99 · 146 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-146
Indawo ezungeze amadolobha amakhulu ephephile nethulile edolobheni elidala.
Ipaki Lezimoto: Ayikho ipaki langasese lemoto ye- "The Suite" kodwa ngokuvamile kukhona indawo yokupaka yamahhala emgwaqweni phambi noma eduze kwesakhiwo.
Ujoyine ngo-Septhemba 2016
I'm Nelly. My co-host Maria and I (mother and daughter), have put a lot of love and "meraki" (passion) into the Roof-Garden Suite.
Maria is an interior designer and has paid attention in every little detail of The Suite.
Me, I am a cacti and succulent enthusiast. Gardening is my hobby and I always try to grow my collection bigger!
It would be a great pleasure to meet and host you!
Ababungazi bazoba khona ukukwamukela ubuso nobuso futhi baphendule noma yimiphi imibuzo phakathi nokuhlala kwakho.
UNelly Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 00000239897
Hlola ezinye izinketho ezise- Kavala namaphethelo